Fetsy tsotra hamoronana lalina ao amin'ny Illustrator nefa tsy mila 3D | Famoronana an-tserasera
Miezaha mamorona lalina amin'ny Illustrator
Mba hamoronana ny lalina ao amin'ny Illustrator ary hanome endrika mahaliana kokoa sy mahavariana amin'ny tetikasa sary rehetra dia misy fika kely fotsiny. Ambonin'izany rehetra izany, raha te hanome fahasarotana bebe kokoa amin'ny firavaka na tsipika isika fa tsy ireo mpandray anjara lehibe amin'ny famoronana, dia afaka manampy antsika ny filalaovana jiro sy aloka. Ho an'ity dia tsy ilaina ny mampiasa 3D, afaka ataontsika amin'ny kopia sy paty tsotra izy io.
Ka, ohatra, raha manana firafitra toy ny litera etsy ambany isika, saingy maniry ny tsy ho fisaka loatra ny haingon-trano anatiny, afaka mamorona lalina ao amin'ny Illustrator isika, nefa tsy manatrika programa hafa.
Mba hanaovana izany dia mila maka tahaka sy mametaka ny kapoka tadiavinay hiasa amin'ny toerana iray indroa izahay (Fanaraha-maso na baiko + C ary aorian'ny Fanaraha-maso na baikon'ny + F). Manaraka izany dia tsy maintsy misafidy iray amin'ireo kopia hita eo ambanin'ilay tany am-boalohany ianao amin'ny filaharan'ny sosona ary afindrao kely mankany amin'ilay lalana tianao hamokarana ireo jiro sy aloka.
Avy eo, miaraka amin'ilay kopia voafantina, dia mila manova ny lokony ho lasa maivana kokoa ianao. Raha endrika be pitsiny io, dia tsara kokoa ny mampiasa (Manova / Manova loko / Sary recolor) ary safidio ny loko tadiavina.
Avy eo averinay ihany ny fizotrany fa ny famindrana ilay kopia ambany amin'ny làlana mifanohitra amin'ilay teo aloha dia hanova ny lokony ho lasa maizina kokoa.
Ity vokatra ity dia mety tsy dia marina loatra raha toa ka tsy mitovy na akaiky ny sary. Noho izany, mba hanalefahana ity dia azonao atao ny manazava ny sisin'ny kopian'ny offset eo ambanin'ilay voalohany. Mba hanaovana izany, azontsika atao ny manisy blur Gaussianina kely ho an'ny tsirairay (Effect / Blur / Gaussian Blur). Io effets io ao amin'ny Illustrator dia tena voafetra ka tsara kokoa ny manome azy radius kely dia kely foana.
Ho famaranana, hita avy lavitra, dia tokony ho afaka hamorona lalina ny Illustrator io vokatra io araka izay notadiavintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Miezaha mamorona lalina amin'ny Illustrator
Webs handefa ny GIF's
Jamboard, kilalao lafo vidy Google sy BenQ ho an'ny ekipa fiasa nomerika sy fivoriana